‘विश्वभरि नेपाली ‘फ्रन्टलाइन’मा छन्, समस्या भएका ठाउँमा एनआरएनए साथमै छ’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १२ गते ३:३०
विश्वव्यापी भइसकेकाे काेराेना महामारीले विभिन्न देशका नेपाली पनि प्रभावित छन्। विश्वका धेरै देशमा काेराेना भाइरस संक्रमणबाट नेपालीकाे मृत्यु भइरहेकाे छ। धेरै नेपाली संक्रमित भइरहेका छन्।
खाडी, युराेप, अमेरिकालगायत विश्वका थुप्रै देशमा लाखाैं नेपाली छन्। स‌ंक्रमणकाे याे घडीमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीकाे साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सहयाेग गरिरहेकाे छ। यसै प्रसङ्गमा एनआरएनएका महासचिव डा. हेमराज शर्मासँग हेल्थपाेस्ट नेपालका अशाेक अधिकारीले कुराकानी गरेका छन् :
विश्वका कति देशमा कति नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित भएको पाउनुभएको छ र कसरी संक्रमित भएको पाउनुभएको छ?
विश्वका झन्डै २१ देशमा करिब १ हजार २ सय नेपालीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अधिकांश देशमा नेपालीहरू फ्रन्टलाइनमै काम गर्छन्। ट्याक्सी ड्राइभिङ, हस्पिटालिटी, क्लिनिङ, केयर हबहरूमा काम गर्नेको संख्या धेरै छ। जहाँ–जहाँ धेरै एक्स्पोज हुने ठाउँ छ, त्यहाँ नै धेरै नेपाली काम गर्दै आएका छन्। त्यसैले, कोरोना संक्रमणको सम्भावना त्यतिकै उच्च हुने भयो। अमेरिकामा पनि र बेलायतको स्थिति उस्तै हो। त्यसैले, नेपालीहरू, गैरआवासीय नेपालीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको पाइएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा कसरी काम गरिरहेको छ?
गैरआवासीय नेपाली संघले तीन फेजको कार्ययोजना गरेर काम गरेको छ। पहिलो, महामारीमा कसरी बच्ने भन्ने हो। र, यता जानकारी पठाउने हो। त्यो फेज एक किसिमले पूरा भयो। अर्को फेजमा धेरै मानिसलाई मनोवैज्ञानिक समस्या आउने, डिप्रेसन हुने र सामाजिक समस्यासम्म हुने भएकाले त्यसलाई पार लगाउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। यद्यपि, अहिले हामी राहत विवतरणमै केन्द्रित छौं। विद्यार्थीहरू र तत्कालै जागिर गुमाएर खान बस्न समस्या भएका नेपालीलाई अप्ठेरोमा पर्नबाट जोगाउने प्रयासमै छौं हामी। त्यसैले, अहिले चाहिँ सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीलाई राहतको प्रबन्ध गर्ने क्रम चलिरहेको छ। केही दिनअघि हामीले विभिन्न देशस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक आह्वान पनि गरेका थियौं। केही देशमा त्यहाँका नेपालीले धान्न नसक्ने स्थिति छ अहिले। त्यसैले, बाहिरको सहयोग आवश्यक पर्छ। साइप्रसमा धेरै विद्यार्थी छन्। माल्टामा पनि उत्तिकै संख्या छ। जनसंख्या कम भएका देशमा गएका नेपाली त्यहाँ स्थापित पनि भइसकेका छैनन्। र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या धेरै भएको ठाउँमा संकट उत्पन्न भएको छ। त्यहाँका नेपालीलाई तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः अन्य मुलुकबाट राहत सामग्री पठाउनुपर्ने स्थिति छ। केही देशमा तत्कालै राहत पठाउने तयारी गरेका छौं।
हो, बेलायतमै पनि दूतावासको तथ्याङ्कमा १७ जना छन्। तर, मृतकको संख्या १८ हो। सरकारले राख्ने तथ्याङ्क नेपाली हो कि होइन, पासपोर्ट छ कि छैन भनेर हेरेका आधारमा हुन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघले चाहिँ पारिवारिक स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गर्छ।
राहत सामग्री कसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ, गैरआवासीय नेपाली संघले मात्रै कि? त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास र अन्य सामाजिक संघ–संस्थासँग पनि समन्वय गरिरहनुभएको छ?
गैरआवासीय नेपाली संघसँगै नेपाली दूतावासहरू र सामाजिक संघसंस्थाहरू पनि राहतको काममा सक्रिय छन्। सम्बन्धित मुलुकमा संयुक्त प्रयासबाट मात्रै राहत वितरण प्रभावकारी हुने भएकाले एकजुट भएर नै हामीले काम गरिरहेका छौं। कतैबाट सूचना प्राप्त गर्न पनि संयुक्त साझेदारीमा काम गर्न जरुरी हुन्छ। र, राहत प्याकेज पुर्‍याउन पनि संयुक्त रूपमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं।
गैरआवासीय नेपाली संघले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गरेको थियो। उक्त बैठकमा के–के विषयमा कुरा भयो?
गैरआवासीय नेपाली संघले गरिरहेका राहत वितरणको प्रयास र समस्यासम्बन्धमा जानकारी गराएका थियौं। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन र नेतृत्वमा संरचना बनाउन आग्रह गरेका छौं। दूतावासहरू आ–आफ्नो मोडलमा काम गरिरहेका छन्। तर, संघसंस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन भएको पाइएको छैन। परराष्ट्रले पहल गरेर दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ र सरोकारवाला संघसंस्थालाई समन्वय गराउन आवश्यक छ। दूतावासका पनि आफ्नै लिमिटेसन छन्। पाँच–सात कर्मचारी रहन्छन् दूतावासमा, सबै बाहिर गएर काम गर्न र मोबिलिटीका हिसाबले पनि गाह्रो छ। घर–घरमा खाना पुर्‍याउने, औषधि पुर्‍याउने काम त गैरआवासीय नेपाली संघले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतसाधनको उपलब्धताका हिसाबले पनि संयुक्त प्रयासमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा एउटा संयुक्त साझेदारीको कामको सुरुवातको पहल गर्दैछौं।
भिसा सकिएको स्थितिमा विभिन्न देशबाट नेपाली फर्किनुपर्ने हुनसक्छ। फर्किन चाहनेहरू पनि हुनसक्छन्। टुरिस्ट भिसामा गएकाहरू पनि उत्तिकै छन्। पारिवारिक भेटघाटमा आएका छन्, कतिपय। प्राथमिकता तोकेर लानुपर्छ पक्कै पनि। त्यहाँ कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।
अहिलेसम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा कति नेपाली कोरोना संक्रमित भएका छन् र कतिको ज्यान गइसकेको तथ्याङ्क पाउनुभएको छ?
विश्वका विभिन्न मुलुकमा अहिलेसम्ममा ३२ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायतमा १८, अमेरिकामा १० र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा दुईजनाको मृत्यु भएको जानकारी पाएका छौं। जापानमा पनि एकजना नेपालीको मृत्यु भएको छ। तर, भारतीय राहदानीवाहक भएकाले जापानस्थित नेपाली दूतावासले उनलाई भारतीय नागरिक भनेको छ। वास्तवमा, उनी नेपाली नागरिक नै हुन्। नेदरल्यान्डमा एक र आयरल्यान्डमा एक नेपालीले ज्यान गुमाएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं।
तर, नाम सार्वजनिक भएका र दूतावासहरूले सार्वजनिक गरेका नाम र संख्या तपाईंले भन्नुभएको भन्दा थोरै छ नि?
हो, बेलायतमै पनि दूतावासको तथ्याङ्कमा १७ जना छन्। तर, मृतकको संख्या १८ हो। सरकारले राख्ने तथ्याङ्क नेपाली हो कि होइन, पासपोर्ट छ कि छैन भनेर हेरेका आधारमा हुन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघले चाहिँ पारिवारिक स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गर्छ। तथ्याङ्क राख्दै आएका छौं। दूतावासले नामसहित राखे पनि हामीले चाहिँ डाक्टरहरूको स्रोतबाट आएको जानकारीका आधारमा तथ्याङ्क राखेका छौं।
गैरआवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू र अन्य सामाजिक संघसंस्थासँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ?
गैरआवासीय नेपाली संघले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमार्फत् काम गरिहेको छ। अब अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने विषय चाहिँ देशअनुसार फरक हुन्छ। कुनै देशमा हामीले आफैं काम गरिरहेका छौं। कुनै देशमा चाहिँ सरकार अर्थात् दूतावासले संरक्षकत्व प्रदान गर्ने र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा अरू संघसंस्थासँग मिलेर सहकार्य गर्ने अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ।
अन्य कुनै देशमा चाहिँ एउटा क्षेत्र एउटा संस्थालाई जिम्मा दिने र अर्को क्षेत्रमा अर्को संस्थाले काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने जिम्मा एउटा संस्थाले पाएको छ। पूर्वगोर्खाहरूलाई हेर्ने जिम्मा अर्कै संस्थाले जिम्मेवारी पाएको छ। कतिपय स्थानमा नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ र अन्य संघसंस्थाबीच समन्वय देखिँदैन। त्यसैले, हामीले नेपाली दूतावासलाई समन्वयका लागि आग्रह गरेका हौं। महामारी बढ्दै जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। त्यसैले, यो संकट टार्नका लागि निर्देशन दिन र उत्पन्न हुन सक्ने संकटको समाधानका लागि पहल गर्न नेपाली दूतावासलाई भनेका छौं।
सबैभन्दा पहिलो कुरा सचेतना नै हो। कस्तो ठाउँमा रिस्क हुन्छ। कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। सामान्य सावधानीले पनि कोरोना संक्रमण हुँदैन। मास्कको प्रयोग, पन्जाको प्रयोग र सामाजिक दुरी कायम राखेर काम गर्ने गरेका छौं।
बेलायतमा धेरै नेपाली संक्रमित छन्। पहिलो पङ्क्तिमा बसेर काम गर्दा तपाईंहरूले चाहिँ के–कस्ता सावधानी अपनाउनुभएको छ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा सचेतना नै हो। कस्तो ठाउँमा रिस्क हुन्छ। कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। सामान्य सावधानीले पनि कोरोना संक्रमण हुँदैन। मास्कको प्रयोग, पन्जाको प्रयोग र सामाजिक दुरी कायम राखेर काम गर्ने गरेका छौं। फ्रन्टलाइनमा जाने साथीहरू सचेत हुनुहुन्छ। बेलायतमा सरकारले नै सामाजिक दुरी कायम राख्न सचेत गराएको छ, आफ्नै नियम पनि छ। सबै सचेत भएकाले सुरक्षित हुनुहुन्छ। फ्रन्टलाइनका साथीहरू पनि उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहनुभएको छ।
काम नगरी दैनिकी चलाउन नसक्ने, आर्थिक रूपमा सवल नभएका नेपालीहका लागि के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू समस्यामा पर्नुभयो भने कसरी सहयोग पाउनुहुन्छ?
अधिकांश मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली संघको सम्पर्क स्थापित छ। त्यसैगरी, नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पनि आउनसक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ सम्पर्क हुन सकेन भने गैरआवासीय नेपाली संघको हटलाइन नम्बर चौबिसै घन्टा खुला रहन्छ। जुनसुकै देशमा भएको दूतावास र जुनसुकै देशका एनआरएन कमिटीहरूको नम्बर पनि उपलब्ध हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, मेडिकल डाक्टरको सहयोग चाहिएमा, कोरोनाले संक्रमित हुनुभएमा पनि चिकित्सकहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। कोरोनाको प्रभावले कुनै किसिमको मानसिक समस्या भएमा विश्वव्यापी रूपमा डाक्टरहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। अहिले एकअर्कालाई सहयोग आदानप्रदान गर्ने र धैर्य हुनु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल सरकार, विभिन्न दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ तथा विभिन्न संघसंस्थाहरू सक्रिय छन्। कुनै समस्या परेमा तत्कालै सम्पर्क गर्नुहुन आह्वान गर्दछु। जहाँ रहे पनि सकुशल रहन अनुरोध छ।